Akụkọ - Beijing Winter Olympics "bia"
Were Beijing Zhangjiakou ụgbọ okporo ígwè dị elu ịga leta "ice na snow ọhụrụ obodo" mpaghara asọmpi Zhangjiakou dị na Chongli District, Zhangjiakou City, Province Hebei. N'ehihie nke 19, Nke a bụ nke mbụ na-agba ọsọ ụgbọ okporo ígwè na ụwa na-aga ozugbo na Olympic Games ..
Zlọ ọrụ Taizicheng nwere nyiwe atọ na ụzọ mbata na ọpụpụ anọ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ kacha elu nke nnyefe kwa ụbọchị nwere ike iru karịa mmadụ 4000. A malitere iwu ụgbọ okporo ígwè Beijing Zhangjiakou dị na December 2015 wee tinye ya n'ọrụ na Disemba 30, 2019. Mmeghe ya na arụmọrụ gosipụtara ọganihu ọhụrụ na nkwado na-akwado egwuregwu Olympic Winter. Mgbe emepechara ụgbọ okporo ígwè Beijing Zhangjiakou dị ọsọ ọsọ, a ga-enwe ike ịnweta isi ebe a na-eme egwuregwu egwuregwu Olimpik site na Beijing ruo obodo Prince n'ime otu elekere.
"Ice jed mgbanaka" na "snow Ruyi"
A maara mpaghara asọmpi Zhangjiakou dị ka "ebe kachasị mma eji egwu ski na North China". Secretary General Xi Jinping wee bịa na mba ski jump center. Nke a bụ ebe asọmpi nke nwere nnukwu owuwu ihe na nsogbu kachasị ike na mpaghara Zhangjiakou. N'oge asọmpi ahụ, ọ ga-amalite asọmpi niile nke ịwụ elu ski na ihe omume Nordic, na-eweta akara ọla edo 8.
E wuru etiti mba ski n'etiti ndagwurugwu. Ebube ụkpụrụ ụlọ bụ nke ihe ịchọ mma ọdịnala ndị China "Ruyi" sitere n'ike mmụọ nsọ, nke aha ya bụ "xueruyi". Ewubela egwu abụọ na etiti ski ski, nke gafere nnabata nke International Snow Federation na Nọvemba 2020, na-atụgharị na "snow Ruyi" na-eri ugwu ahụ
"Xueruyi" na-eji windo windo windo curved, site na nke ị nwere ike ileghara ụzọ ski anya. N'ebe a na-awụli elu ski, Xi Jinping gara na nkasi obi nke ndị egwuregwu, ndị nkuzi na ihe ndị ọzọ. Xu Gaohang, onye ndu otu ndi otu nkuzi egwuregwu ski, kowara onye ode akwukwo n’otu ubochi ahu. Ọ gwara "anya akụkọ ọhụụ ugbu a" na ntiwapụ nke ọrịa belatara ohere nke asọmpi ma nwee ike "ịm ụ nka dị n'ime n'azụ ụzọ". Kemgbe ngwụcha afọ gara aga, ndị otu a lekwasịrị anya na ọzụzụ oghere ikuku, ma nwee ike ịnwe mmetụta nke ikuku ikuku atọ dị iche iche, nke na-ezere nsogbu nke obere oge na usoro ọzụzụ na ohere, ma meziwanye ọzụzụ ọzụzụ. .
Ọzụzụ ịgba Ski na Zhangjiakou, ebe etiti mba na-awụlikwa elu, etiti mba na-agba ọsọ skiing na etiti mba biathlon na-etolite otu egwuregwu egwuregwu poplar oge ochie. Nke a bụ otu egwuregwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu ọhụrụ kpamkpam. Ejikọtara ebe ndị ahụ site na okpokoro okirikiri ije "ice jed ring" na nkezi elu nke banyere 8 mita. Ebe etiti mba biathlon bụ ama egwuregwu ikpeazụ nke asọmpi Olympic nke onye isi ọdee akwụkwọ nyochara n’ụbọchị ahụ.